Faransiiska oo u soo bandhigay Midowga Yurub Sharci Cusub oo lagu Caawinayo Qaxootiga kasoo gudba Mediterranean-ka
HomeWararka CaalamkaFaransiiska oo u soo bandhigay Midowga Yurub Sharci Cusub oo lagu Caawinayo Qaxootiga kasoo gudba Mediterranean-ka
June 12, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Denmark, Wararka Finland, Wararka Maanta, Wararka Norway, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Faransiiska Gerald Dermanan ayaa soo dhaweeyay dalalka Yurub inay taageereen hindise Faransiiska uu keenay oo lagu caawinayo dalalka xuduudka leh ee Mediterranean-ka ee cadaadiska saaran iyada oo la wareejinayo magan-gelyo-doonka ama samaynta tabaruc dhaqaale.
Tani “habka wadajirka”, kaas oo lagu soo bandhigay shirkii wasiirrada arrimaha gudaha ee Yurub ee Luxembourg sida lagu sheegay bayaan qabyo ah oo ay aragtay AFP.
Hadafka ayaa ah in la gaaro 10,000 kun sanadka ugu horeeya, sida laga soo xigtay ilo badan oo Yurub ah. Waxa ay ku soo beegantay iyada oo la socota xoojinta hubinta lagu sameeyay xuduudaha Midowga Yurub, ayuu yidhi Dermanan, oo waddankiisu uu hayo xilka madaxtinimada ee Golaha Midowga Yurub, isagoo amaanay “tallaabo weyn oo hore loo qaaday” ee dib-u-habaynta Siyaasadda socdaalka Yurub.
Xubnaha Midowga Yurub iyo Schengen Space waxaa lagu martiqaaday inay ballan-qaadaan inay magangelyo-doonka ka wareejinayaan dalalkii ay markii hore soo galeen ama, haddii ay taasi maqan tahay, ay u sameeyaan tabaruc dhaqaale ama agabka shaqaalaha ee dalalkan. “In ka badan 10 waddan ayaa taageeray wareejinta, taas oo ah mid aad u wanaagsan,” ayuu yiri wasiirka Faransiiska markii uu yimid kulanka. Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ka mid ah dalalkaas.
Nederland ayaa ku dhawaaqday in aysan qaabili doonin dadka magangalyo doonka ah, iyadoo xustay in nidaamka qaabilaada uu saaran yahay cadaadis weyn. Balse ilo dublamaasiyadeed ayaa sheegay in laga yaabo in dalka uu si kale wax ugu darsado.
Austria, ayaa dhankeeda muujisay sida ay uga soo horjeedo iyo walaaca ay ka qabto “in ay fariin xun u dirto dadka wax tahriibiya.